22 Netflix Mazano Okuwedzera Binge Yako-Kuona
Muri pano: musha / nzira yekugadzira nhamba yefoni yekombiyuta yekombiyuta / 22 Netflix Mazano Okuwedzera Binge Yako-Kuona
Iyo "mambure" muNetflix ingangomirawo "network. Iyo yekufambisa sevhisi yakavaka inotevera chirongwa chayo chepakutanga neImba yeMakadhi, zvakaita kuti tifarire kuti kubheja-kutarisa hakusi pamutemo neOrange ndiko Nhema diki uye yakagadzirwa." isu hatikwanisi l'eggo dzeStranger Zvinhu.
Nesarudzo zhinji, zviri nyore kurega zvinhu zvakamira mutsara. Zvimwe iwe hausati watambira kutenderedza kusvika kumwaka mutsva weLuka Cage kana kunakidzwa naLucy Liu naTaye Diggs kumutsidzira rom-com mu Set It Up. Waona here Nanette zvakadaro? Aihwa? Wakamirira chii?
Netflix hairatidzi chiratidzo chekudzikira pasi; zvinogona vanopedza kusvika ku $ 8 mabhiriyoni gore rino pazviratidziro zvepakutanga nemafirimu. Yakatokundwa pamusoro paGrey's Anatomy uye mugadziri weScandal Shonda Rhimes, ndiani kubudisa zviratidzo zvitsva nokuda kweNetflix, neAmerica Inotyisa Nyaya uye Glee muumbi Ryan Murphy, uyo ari kuita zvakafanana mune kutora zvakakwana kusvika kune $ 300 mamiriyoni. Uye o, hongu, yakabvongodza Barack naMichelle Obama nokuda kwekutengeserana kwakawanda kwekunyora zvinyorwa zvisiri zvinyorwa, zvinyorwa, uye zvikamu.
Nezvibodzwa zvakawandisa zvepakutanga, zviri nyore kukanganwa kuti pane huru sitendi yeTV mafirimu nemafirimu ayo kuchinja nguva dzose. Saka tora chikwata uye uende.
Unogona kunge uchiona Netflix pane sofa uri wega, asi hausi kuzogara wega. Netflix ine zvakawanda kupfuura 130 mamiriyoni evanhu kubvira raJuly 2018, saka hausati wave kure nehama
Kutanga kwakajeka sekutora firimu uye kufambisa kutamba. Zvisinei, kune maitiro mashomanana aunogona kushandisa kuti uwane zvakanakisisa kubva pane zvaunoona uchiona.
Dharirai paIndaneti Kuona
Kana iwe uchiziva iwe uchave sans network yekubatanidza kwenguva yakareba yenguva, unogona kurodha mashoma episode e GARA or Inonaka Inofadza kana chinhu chakanaka chero chipi zvacho kupfuudza nguva. Yakawanda yeNetflix mavambo aripo ekuti utorwe, asi iwe unowana mamwe mamwe mafirimu uye mafirimu zvakare.
Dzvanya pamusoro wenyaya uye (kana zviripo) rova ​​iyo yekurodha icon (). Kana, tinya hamburger menyu kumusoro kuruboshwe () uye sarudza "Inowanikwa Kutora" kuti uone zvese zvaunogona kurodha pasi. Tsvaga zvirimo zvakatorwa pasi peye hamburger menyu> Zvangu Zvandinotora. Vashandisi veApple vanogona zvakare tsanangurira nzvimbo yekudzivirira (pasi peApp Settings) kana vachida kuchengeta zvose pane kadhi re SD.
Netflix munguva pfupi zvakasimuka ichi chinhu chiduku kune vashandisi ve Android nechinhu chinonzi Smart Downloads. Paunenge uchitora chikamu mumakwikwi, chikamu chekuona chichabviswa zvachose uye chikamu chinotevera chichatsvaga. Iwe unogona kuisa izvi mukati memaDisipera pasi peKudzingwa; toggle Smart Downloads kubva.
Kana iwe uine munhu anopfuura mumwe chete achishandisa iyo imwe nhoroondo yeNetflix, zvido zvingangodaro zvakasanganiswa, zvichiita kuti pane zvinokuvadza zvinokurudzira. Kuti ave nechokwadi chokuti umwe neumwe wevashandi ane ruzivo rwemunhu, denga rako pachako. Akaundi yega yega inobvumidza kusvika pamashanu maprofessi kuitira kuti mwana wako asawane Kurasika Kwakasarudzika, uye iwe unokwanisa kukanzura Riverdale kune yako mwana rondedzero. Kamwe profiles yaiswa, Netflix inobvunza kuti ndiani ari kutarisa chero nguva yaunosaina pairi (pamusoro) uye anokuendesa kune yako yakavanzika yekutanga peji.
Kuti utange, chengetedza zita rako nechokumusoro kweNetflix.com, sarudza Akaunti> Yangu Mbiri> Manage profiles. Ikoko iwe unogona kugadzirisa, kudzima, kana kuwedzera ma profiles matsva. Nharembozha, sarudza hamburger icon (), tora zita refaira, uye sarudza "Wedzera Profile" kubva pop-up.
Zivai Ari Kutarira
Netflix ine zvisungo pamusoro pekuti vanhu vangani vanogona kutarisa kubva kuaccount pane imwe nguva: imwe ($ 7.99 pamwedzi), maviri ($ 10.99 pamwedzi), kana mana ($ 13.99 pamwedzi). Asi kugovera kunogona kuve kwakaoma, kunyanya kana mumwe munhu akatovharwa kare paunoda kutarisa. Munguva yakapfuura, Netflix yaizongokuudza iwe kuti kune vaviri (kana vatatu) vamwe vanhu vakatotarisa chimwe chinhu pane yako account. Zvino, Netflix inokuudza kuti ndedzipi michina iri kushandiswa, ichikubvumidza iwe kuti uone kuti ndiani arikuvharidzira yako inotevera binge-wachi (kana kana ex achiri kushandisa account yako).
Kutaura nezve, kana iri nguva yekubuda iyo kunze kweakaunti yako, iwe unogona kuita zvinopfuura kuchinja password. Enda muzvikamu zveAkhawunti, sarudza Saina kunze kweZvose Midzi, uye uzvisimbise pachiratidziro chinotevera. Wese munhu anoshandisa account — kunyangwe iwe! - uchafanirwa kudzokorora zvakare nguva inotevera, kungave kuri pafoni, piritsi, mutambo weConsole, kana chero chipi zvacho. Zvinogona kutora kusvika maawa masere kuti uwane zvese zvishandiso zvako.
Pane Munhu Anoteerera Here?
Imba yeGoogle inoziva inzwi rezwi rako uye zvaunoda kutarisa. Kugamuchirwa kune inotyisa asi Indaneti inobatsira yezvinhu. Itai kuti ikushandirei nekugadzirisa Google Home yako Ziva inzwi rako neShoko Match saka unogona kukumbira kuti itakure mutsara wako weNetflix. Kuti uite, shandisa maGoogle Home app, sarudza Menyu> Google Mubatsiri> Zvimwe Zvirongwa> Vhidhiyo uye Mifananidzo> Netflix> Batanidza, iyo ichabatanidza Google Home kuNetflix app yako.
Get Better Recs
Iye oga munhu waunokuvadza iwe kana uchivenga wachi ndeye iwe pachako. Iwe ukasatarira izvo zvawaona, Netflix ichafunga kuti waifarira uye ndokurudzira zvimwe zvakafanana. Gore rapfuura, Netflix dumped iyo nyanzvi shanu-nyeredzi dzezvinyorwa zvisiri nyore, Pandora-seminwe kumusoro kana pasi. Saka, kana iwe unonyatsoda chimwe chinhu, nzira yakanakisisa yekuwana yakawanda yakafanana nayo ndeyokupa iyo zvigunwe.
Kuziva Mazita Akanakisisa uye Akakurumbira
Mazhinji emhando yepamusoro pamusoro peNetflix peji reimba ndeyekurudziro iwe zvichienderana neyako ratidziro uye chiitiko, zvichiita kuti zviome kuwana dzekuwedzera kana zvimwe zvemamwe mukurumbira mafirimu kana mafirimu. Chishamiso chikuru Instantwatcher.com, iyo inopa yakapusa maviri-ikholamu runyorwa rweanonyanya kufarirwa mafirimu uye maTV show mumaawa makumi maviri nemana apfuura, pamwe nezvazvino kuburitswa. Iyo Yakakurumbira rondedzero zvakare inoteedzera shanduko mune chinzvimbo nepo Nyowani & Inocherechedzwa chikamu chinosanganisira iyo Netflix chiyero pamwe neiyo Rotten Tomato chinzvimbo pazvinowanikwa. Uye uve shuwa yekuchengeta tabo pane yakazara PCMag runyorwa rwe chii chasara uye kuuya kuNetflix mwedzi mumwe nomumwe.
Netflix iri kuwedzera zvinyorwa zvitsva nguva dzese uye zvave kuita nzira iri nyore yekutsvaga zvaunoda. Paunovhura mobile app, uchaona mutsara uyo unoti Kutarisisa. Tinya pachiratidziro uye iwe uchawana miniti yezvimedu zvinokupa iwe unzwe zvakanaka nezvazvo, Instagram nyaya-maitiro. Dzvanya chikwangwani chekuwedzera pazasi chero chipi zvacho kuti uwedzere kune yako tembiricha kana sarudza Play ipapo ipapo kuti utarise chinhu chose.
Kungofanana Nekutevedzera Kwako
Kuti utsvake mhando dzose dzeNetflix dzinofanira kupa, enda kune browser, chinyorwa mu http://www.netflix.com/browse/genre/[INSERTNUMBER], uye ipapo tarisa mazita aya kune nhamba dzinoenderana nere gener yaungada kuferefetwa. Tsiva [INSERTNUMBER] mu URL iri pamusoro neiyo nhamba, uye voila. Ichi chibatanidza, semuenzaniso, inokuendesa kune zvese zvirimo zvakarongwa pasi pe "Action & Adventure."
Iwe unogonawo kukopa Netflix Super Browse extension ye Chrome ($ 1.99 / gore) kana Firefox. Inowedzera hutano hutsva kuNetflix yekushandura nzvimbo yekutsvaga zvinyorwa zvose zvakapetwa, kunyange kune dzimwe mimwe mitauro kubva kune dzimwe nyika.
Chokwadi kune zviuru zvemamuvhi nemabhaisikopo paNetflix, asi ko kana izvo zvauri chaizvo, chaizvo zvauri kuda zvisipo. Iwe unogona kukumbira Netflix kuwedzera mazita nekuenda kune Kumbira TV Mafirimu kana Mafirimu peji uye kupinda mazano ako ipapo.
Mune 80s uye 90s, manzwiro aiwanzobudiswa kuburikidza ne mixtapes. Mazuva ano, unogona denga Flixtape, kana imwe tsananguro yeNetflix yakagadzirwa. Uya nemazita eFlixtape yako, uye Netflix icharatidza mafirimu matatu kana zviratidzo zvinofananidzwa nemanzwiro ayo (unogona kuzvishandura). Zvadaro wedzura mazita matanhatu ezvako, iwe pachako unoisa chifukidzo chayo, uye uchitumire kuburikidza ne email kana mavara kana kugovera pa Twitter kana Facebook.
Tese tine zviratidzo tinonzwa tine mhosva nezvekutarisa. Ko kana usiri kuda misi, nhengo dzemhuri, kana chero ani zvake angave akagara pasi kuti anoona firimu newe kuti azive zvakadii Charmed Wakatarisa here? Iwe unogona ikozvino kudzima zvinhu kubva pane yako yekutarisa chiitiko. Pinda muNetflix.com uye enda kuAccount> Kuona Chiitiko. Dzvanya iyo "x" kurudyi kuti ubvise zvaunosarudza zvinonyadzisa.
Subtitles inowanikwa kune akawanda, kana asiri ese, mazita paNetflix. Asi iyo mavara nyoro kana typeface inogona kunge isingakwanise kune vamwe vataridzi. Neraki, zvinokwanisika kuti uchinje zvimwe. Enda ku Akaunti> Mbiri Yangu> Musoro wemusoro nekuda kwezvinhu zvakasarudzika zvakadai sokushandura typeface, tsamba yevaravara, ruvara rwemuvara, uye uswa hwemavara.
Shandisa Telefoni Yenyu seKutarisa Kuchengeta
Netflix iOS app inogona kuenderana kusarudza terevhizheni uye vatambi vekudhikirira vhidhiyo, nepo Android app syncs ku PS3, PS4, PS4 Pro, uye PS Vita, kukuita kuti ushandise foni yako sedanho kure. Ingo ita shuwa kuti mudziyo wauri kushandisa kuyerera uye foni yako ari maviri akafanana Wi-Fi network, uye ipapo vhura iyo Netflix app pafoni yako uye voenda kure. Microsoft inopa iyo Xbox app kune avo vanoda kutora sarudzo yavo pafoni yavo.
Dzvora Post Post-Play
Kugara pasi kuti uchingotarisa chikamu chimwe chete chewako chaunofarira show hazviiti zvakare nekuda kwaizvozvo Netflix's Post-Tamba chinhu, iyo inongotamba chikamu chinotevera chechiratidziro mashomanana mashure mushure mekodzero. Kana, nokuda kwechimwe chikonzero, iwe unoda kubvisa ichi, enda Akaunti> Mbiri Yangu> Zvirongwa Zvekutamba, uye usabvisa bhokisi rinotamba chikamu chinotevera kamwe chete. Iwe unogonawo kugadzirisa kushandiswa kwedhesi pemawindo.
Kana iwe uri kutarisa chimwe chinhu piritsi rako kana smartphone uye uchingofanira kuigovera, iwe unogona kuita izvo kubva paapp. Enda kune iyo peji peji yemufirimu kana kuratidzira iwe unoda kugovera uye sarudza Mugovana icon (chigaro chine museve chakatarisana-tarisa pane iOS, bhatani rine matatu-matatu pane Android) uye ritumire, ritumira email, kana kutumira. kuburikidza nemagariro enhau.
Save pa Mobile Data
Izvo hazvisi zvakaoma kubiridzira kuburikidza nefoni yako yese yedhipatimendi pasina nguva nekutenderera vhidhiyo pane foni mbozha. Netflix iri chaizvo pano kubatsira. Iine chimiro icho Inokuchengetedza kuchengetedza kushandiswa kwemadhina emasero pane iOS kana Android. Famba uchienda kuZvirongwa zveApp uye wadzima zvinesi "Set otomatiki". Wobva wasarudza kushandiswa kunokodzera iwe kwakanyanya: Wi-Fi-chete inogona kunge iri sarudzo yakanaka kune vamwe, asi iwe unogona kuseta yakaderera / yepakati / yakakwirira iyo ine chekuita kwete chete kuti yakawanda sei data yaunoshandisa, asiwo yemhando yemifananidzo.
Kana yako yekugara imba iri imwe yaungatendera kuti usatarise bhaisikopo, bata rako Gear VR uye anononoka muKolori-ish cabin. Zvakaitika izvi zvinonakidza kupfuura zvinonzwika. Pamusoro pekona yeOculus pamba sarudza Chengetedza, tsvaga Netflix app, sarudza Kuisa, uye kana inopedza kuisa muIndflix account yako.
Back to Ramangwana
Kana iwe uchida kuongorora zvinhu zveNetlix zvisati zvawana rusununguko rwakakura, enda Akaunti> Zvirongwa> Bvunzo Yekutora chikamu uye ona kuti slide iri kuIni.
Kurinda Netflix pane imwe laptop? Tora zvakanyanya kutarisa nekusazishandisa shanduro kana mutsara nemafaira ekukurumidza kwebhodibhodhi:
Pinda-Toggle Play / Pause
Shift + Kuruboshwe-Rewind
Shift + Mhedziso Yakarurama-Kufambira Mberi
Up arrow-Volume Up
Down arrow-Volume Down
Shandura VPN Crackdown
Netflix inocheka akawanda ezvibvumirano nevatengi vanogadzira (mawebhusaiti uye masitudiyo kuseri kwemafirimu nematerevhizheni eTV), uye chibatiso chimwe nechimwe chakasiyana munyika imwe neimwe. Ndicho chikonzero muUS iwe unokwanisa kuona chimwe chinhu chausingakwanisi muUK. Kwemakore, vafambi (uye vanotsamwiswa vashandisi!) Vane zvakatenderedza izvi nekushandisa virtual private network (VPN) software / masevhisi kuti aite sekunge ari mune imwe nyika-kazhinji US. Asi kubva muna Ndira 2016, Netflix yave ichikanganiswa nemuitiro uyu. Kunyange zvakadaro, vamwe VPNs vachiri kushanda; PCMag ine roundup of the Best VPNs for Netflix, kusanganisira NordVPN.
Edza Kupera Kwako
Netflix inoyamwa internet bandwidth kunge Hoover inodya guruva. Pamwe kunyunyuta kwepamusoro kwaanowana kunobva kune vatengi vari kuwana yakaipa yevhidhiyo chiitiko, asi izvo hazviwanzo mhosva yeNetflix. Zvave zviri muhondo nema ISPs pamusoro peizvi kwechinguva, dzimwe nguva kunyange kuripa ISPs kufanana neComcast kuti uwane zvakananga kumaseva (uye kushanda nokukurumidza kwako).
Iye zvino, Netflix ine zvishandiso zvitsva mubasa rayo rekudzikisa mumvuri shure kune vapeji: Fast.com. Enda kune iyo URL uye pasina kubvunzwa iwe uchaita kuti yako yekumhanyisa yaongororwe, inoratidza mhedzisiro muMegabits sekondi (Mbps). Yakafanana neshanduro ye Ultra-yakareruka ye Speedtest; musiyano ndewekuti, Fast.com inokubatanidza iwe zvakananga kune seNetlix servers. Zvechokwadi chengeta imwe yeavo-zvose zviripo pasi rose-usati waenda kunyorera Netflix. Uyezve tarisai Netflix's ISP Speed ​​Index, iyo inoramba ichimhanya kune iyo iyo ISPs iri kuita zvakanakisisa kune vatengi vayo.
Netflix Tips Kuti Uone sePro
20 Netflix Mazano Okuwedzera Binge Yako-Kuona
Ungabvisa Sei "Ramba uchitarisa" Kubva kuNetflix
Maitiro EkuDhawunirodha Shows uye Mafirimu Kubva kuNetflix
31 Instagram Hacks, Matipi, & Zvimiro Munhu wese Anofanirwa Kuziva Nezve
Filed Under: nzira yekugadzira nhamba yefoni yekombiyuta yekombiyuta